China KLT-10000LED vagadziri uye vatengesi |Kupenya
Hydraulic Mast ● Mwenje ye LED ● Light Towers
Nharembozha yemwenje tower yakanyatso kugadzirirwa zvicherwa zvekushandisa.Kutenda kune yayo 6X4000W LED mafashama, iyo KLT-1000LED inopa yakanyanya kuvhenekera kugona uye zvese zvakanaka zvemwenje we LED.Iwo mabhenefiti anosanganisira kusimba uye kushomeka kwekugadzirisa nekuda kwekushaikwa kwegirazi uye magirobhu emwenje.Tangi hombe yemafuta uye injini yekushandisa yakaderera inosundidzira nguva dzemafuta kusvika kumaawa anopfuura makumi mapfumbamwe ekushandiswa.
KLT-1000OLED Chiedza Chiedza
Iyo KLT-1000LED inoshongedzerwa nedhijitari controller yakanyatso dzidza kubata basa rese remwenje shongwe kuitira nyore kushandisa.
Mwenje we LED unopenya
6x400 W yakakwirira kushanda kwe LED floodlights yakagadzirwa neFuzhou Brighter Electromechanical Co, Ltd. Mutevedzeri ane simba repamusoro rekuvhenekera kwehuwandu Sechisarudzo, magetsi emvura anogona kushandiswa ne 24 Volts kunyange kuwedzera kuchengetedzwa kwemuchina.
A vertical telescopic mast ine hydraulic lifting system uye hurefu hwepamusoro hwe9 metres.
Sarudza injini modhi yaunoda pakati Kubota D1105 uye D905.
Hunhu hwemhando yepamusoro hwakadai serevy duty frame, sarudzo yemugwagwa turera uye anti-breaking LED mafashama anoita kuti KLT-100OLED light tower ive modhi yakanyatsokodzera nzvimbo dzakaoma senzvimbo dzemigodhi.
1. Iwe uri fekitori kana kambani yekutengesa?
Isu tiri fekitori uye tinogadzira zvese zvigadzirwa tega.Kugamuchirwa kukambani yedu yekuongorora fekitori.
2.Tingave neChiratidzo chedu kana zita rekambani kuti ridhindwe pane zvigadzirwa zvako kana pasuru?
Sure.your Logo inogona kudhindwa pazvigadzirwa zvako neHot stamping, kudhinda, Embossing.
3.How to be mumiririri wedu?
Chero bedzi uine zviwanikwa zvekushambadzira uye kugona kuita mushure mekutengesa sevhisi, taura nesu kuti uwane rumwe ruzivo nekutitumira kubvunza.
4. Ndinogona here kuva nemuenzaniso wekuraira kwezvigadzirwa zveshongwe yechiedza?
Ehe, isu tinogamuchira sampuli odha yekuyedza uye kutarisa mhando.Mienzaniso yakasanganiswa inogamuchirwa.
Kuti uone kana kuodha KLT-10000LED, fonera 86.0591.22071372 kana shanyira www.worldbrighter com
Dry uremu 1960kg
Kusimudza system Hydraulic
Mast kutenderera 360°
Mwenje simba 6×400W
Mwenje mhando LED
nzvimbo yakavhenekerwa 6000㎡
Injini kutonhora Mvura
Injini kumhanya (50/60Hz) 1500/1800rpm
Muto wemvura (110%) √
Outlet socket (KVA / V / Hz) 3/220/50-3/240/60
Mhepo yekumhanya kwemhepo 80km/h
Led Mwenje Mwenje Tower